Waxsansheeg News - Xaalada taagan iyo Rajada laga qabo Cilmiga PTA iyo Suuqa
PX waa sheyga ugu horreeya ee waxsoosaarka guud ee dhammaan warshadaha polyester ， Isbeddelka warshadiisa wuxuu saameyn gaar ah ku leeyahay guud ahaan warshadaha gaarka ah. in ay si rasmi ah u galaan horumarka is-waafajinta Shiinaha ee Cilmi-baarista Wadooyinka.
Marka hore, fiiro gaar ah u yeelo siinta PX adduunka iyo xaalada baahida. Aagga caalamiga ah ee Shiinaha, Kuuriyada Koofureed, Hindiya, Japan iyo Mareykanka ayaa galay shanta ugu sareysa. , iyada oo ah soosaaraha ugu weyn adduunka, Hindiya sidoo kale waa beensiga baahida ugu weyn. Iyada oo la raacayo sahayda dibedda ee dalabka gudaha, ku dhawaad ​​60% baahiyaha sanadlaha ah ee loo baahan yahay in lagu tiirsanaado Ka soo dhoofinta wadamada dariska ah sida South Korea iyo Japan. Sannadkii 2018, wax soo saarka PX ee Shiinaha wuxuu ahaa kaliya 10.31 milyan oo tan, mugga soo dejintiisu wuxuu ahaa illaa 15,63 milyan oo tan, marka si kale loo dhigo, waxay u baahan tahay inay soo dejiso wax ka badan 1 milyan tan oo PX bil kasta.
Iyada oo la raacayo hagidda farqiga u dhexeeya suuqa iyo soo jiidashada faa iidada si loo siiyo siyaasad taageero ballaarinta awoodda wax soo saarka Para xylene ee Shiinaha waxay gashay xilli cusub 2005Tusaale ahaan Hengli Petrochemical ee Dalian, Shenghong Petrochemical in Lianyungang, Jiangsu Sanadka 2019, awoodda wax soo saarka cusub ee PX ee 4.5 malyan tan oo ah Shirkadda Hengli Petrochemical, Shirkadda Hongrun Petrochemical Company, oo la hawlgaliyay bishii Ogosto, iyo Hainan Refining iyo Chemical Wejiga II, oo la hawl galiyay bishii Oktoobar, dhammaantood waxay xaqiijiyeen hawlgal ganacsi. Isla mar ahaantaana, rubuc-afaraad, waxaa jira qaab loo habeeyay, oo waxaa jira suurtagal suurtagal ah in la bilaabo. Waxaa lagu qiyaasaa in awoodda wax soo saarka cusub ay gaari doonto 10.3 milyan oo tan sanadkii, taasoo ah koror 53% isla muddadan oo kale sanadkii hore. Laga bilaabo 2020 illaa 2022, weli waxaa jiri doona 25 milyan oo tan, iyo awood cusub ayaa suuqa la gelin doonaa midba midka kale.
Ka soo horjeedda soo noqoshada sahayda gudaha ayaa kicisa saadka Shiinaha ee PX iyo aragtida baahida ayaa si weyn isu beddeli doonta. Iyada oo si dhakhso ah loo ballaadhinayo awoodda wax soo saarka Shiinaha ee 'PX', saadka mustaqbalka iyo qaabka dalabka ee Waqooyi-bari Aasiya ayaa si tartiib tartiib ah isu beddelaya, marka loo eego masaafada qiimaha iyo macaashka ku habboon, waxaa sidoo kale loo dhoofin karaa waddammada leh baahi. Xiriirka ganacsi ee koonfur-bari Aasiya ， Waxaa sidoo kale suurta gal ah dhoofinta hal-hal ah oo loo rogo isu-gudub ganacsi
Marka laga eego aragtida sahayda adduunka iyo hannaanka baahida, Shiinaha ayaa ah isha ugu weyn ee adduunka laga keeno, laakiin sidoo kale macaamiisha ugu weyn. Awoodda wax soo saarka Shiinaha ee sanadlaha ah waxay ahayd 52.29 milyan oo tan, taasoo ka badan kala bar tirada guud ee adduunka. Marka la eego aragtida socodka ganacsiga adduunka, mugga dhoofinta guud ee Shiinaha waa 760 kun oo tan, inta badan waxay ka timid Thailand, Taiwan iyo South Korea.
Marka laga yimaado xaaladda sahayda qoyska, isbeddelka faaiidada ayaa ah tusaha ugu muhiimsan ee sahayda PT ee gudaha. Sannadkii 2011, PHP waxay gashay fidinta awoodda, taas oo dhalisay in si xoog ah looga soo baxo awoodda wax soo saarka, taas oo horseeday dib-u-soo-kabasho laxaad leh heerka PDA. Xaaladda tartan, isweydaarsiga faa iidada muddada fog ayaa u muuqda inuu liito, xoogaa wax soo saar dib-u-dhac ah ayaa la tirtiray, sahaydii iyo rabitaannuna waxay u muuqdaan kuwo isku-dheelitirnaan adag.PT wuxuu furmayaa 2017, PK wuxuu galay marxaladda hagaajinta qiimaha barwaaqada. Sanadka 2019, heerka macaashka ee PTA ayaa hal mar kor u kacay 1700 yuan halkii ton.PK wuxuu adeegsaday mowjad cusub oo wax soo saar ah.
Saamaynta ay ku leedahay kor u qaadista deegaanka Terminal, dardar gelinta polyester, balaarinta awooda Isukeenida warshadaha polyester si weyn ayaa loo wanaajiyay, waana isbeddelka ugu weyn ee warshadaha polyester labadii sano ee la soo dhaafay. Iyadoo ay weheliso ballaarinta, ballaarinta polyester, tartan ayaa la xoojiyay, si heerka macaashka uu si weyn hoos ugu dhacay, awoodda soosaarka mustaqbalka ee polyester-ka ayaa u muuqda mid caqli gal ah.
Maaddaama ballaarinta silsiladda warshadaha aysan wada shaqeyn, marxaladda qalabka ceyriinka adag waxay ku kaliftay heerka faa'idada warshadaha polyester, ifafaalaha khasaaraha geedka polyester inta sanadka lagu jiro. Marka la eego aragtida isbeddelada mustaqbalka, kobcinta kobcinta sahayda ee mustaqbalka, iyo sidoo kale caqabadaha habsami u socodka iyo kharashaadka wax soo saarka ayaa hoos u dhiga ballaarinta macaashka polyester. Si kastaba ha noqotee, kala goynta ganacsiga Sino-US waxay saameyn ku yeelan doontaa suuqa ilaa xad. Lacagta canshuurta ee laga qaado dharka Shiinaha ayaa si toos ah u saameyn doonta dhoofinta dharka Shiinaha ee loo dhoofiyo Mareykanka, in kasta oo ay jiraan calaamado muujinaya horumar laga gaaray wadahadalladii ganacsi ee Sino Mareykanka ee dhowaanta. Xiriirka Sino-Mareykan ee ku soo rogeynta Shiinaha ee soo rogaal-ka-goynta ee dharka ayaa saameyn toos ah ku leh dhoofinta dharka Shiinaha ee loo dhoofiyo Mareykanka. In kasta oo ay jiraan calaamado wax ku ool ah wadahadaladii ganacsiga ee Sino-US ee dhowaanta, dharka EU-da iyo carqaladaha ganacsiga gaarka ah ee ka dhanka ah Shiinaha ayaa si tartiib tartiib ah u kordhay sannadihii la soo dhaafay, isbeddelkuna waa mid muuqata. Tani waxay si toos ah u saameyn doontaa dhoofinta Shiinaha.